Black Mirror - Ịhụnanya ụmụ nwoke - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Black Mirror nkezi 4.2 / 5 si 33
NA / A, o nwere ihe nlere 107.8K
Horror, mma, Ọkà mmụta, thriller, Yaoi
Tae Joon nwetara ihe omume mkpamkpa n'oge ntorobịa nke mere ka o chefuo ncheta nwata ya.
Mgbe ọ batara, Tae Joon malitere inwe nrọ jọgburu onwe ya nke aka na-enweghị atụ na-atụgharị ahụ ya ma ọ bụ Yeon Woo na-enye ya ihe ụtọ ọ na-amaghị. N'ịbụ onye ihe na-eme kwa ụbọchị nke nrọ abalị ndị a na-ahụ n'anya na-atụ ya n'anya, ọ malitere ịda mba. N'agbanyeghị ịmara ọnọdụ Tae Joon, Yeon Woo na-egosipụta amaghị ama ma soro ya nwee mmekọrịta mmekọahụ.
Ị nwere ike ime ya ka ị na-eche banyere m. Naanị gwa onwe gị eziokwu ma akwụsịla.” Ọ bụ ezie na mgbanwe omume ndị a na-ewute Tae Joon, ọ nweghị ike ịtụ anya ka Yeon Woo mebie ọzọ…
Arnis Na Mma agha
Ọnọdụ Girlsmụ agbọghọ